“ကြယ်ကြွေကို ပြာနဲ့ဖုံးချင်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီ”… – PVTV Myanmar
“ကြယ်ကြွေကို ပြာနဲ့ဖုံးချင်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီ”…
·5months ago ·36 Comments
“ကြယ်ကြွေကို ပြာနဲ့ဖုံးချင်နေတဲ့ စစ်ကောင်စီ”
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့မှာ လူငယ်တစုဟာ လာရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို အညံ့မခံ၊ ဒူးမထောက်ဘဲ ၄ လွှာကနေ ခုန်ချသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို လူငယ်တွေကို မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲထားတယ်လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုဟာ တကယ်တော့ ကြယ်ကြွေကို ပြာနဲ့ ဖုံးချင်နေတာပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်လှတဲ့ လင်းလက်တောက်ပမှုကို ဘယ်သူကမှ ဖုန်းကွယ်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။
ဒီအကြောင်းကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ ဘကျော်ရဲ့ ဆောင်းပါးကို ကြည့်ရှူနားဆင်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2021-08-15 at 7:07 PM
ဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်ကြေး အခွင့်အရေးရတဲ့ တနေ့ အဲကောင်တွေကို မမြစ်ကနေလှန်ထုတ်ကြရမယ် သူရဲကောင်းလေးတွေကို အရေးပြုပါတယ်
Nga Pu says:
44 လမ်း မှ ထွက်သွားနှင့်သူ ကျန်ရစ်သူ လူငယ် အားလုံး ကို လေးစားပါတယ်
2021-08-15 at 7:32 PM
ကျွန်တော် လဲ ထွက့်လာတဲ့
အသံဖိုင် ကိုသံသယ ဖြစ်ပါတယ် စလာတည်က
ဒါဟာ တမင် ကို တင်လိုက်တာ
လေးစားရတဲ့ သူရဲကောင်း တွေပါ
2021-08-15 at 7:48 PM
2021-08-15 at 7:56 PM
Unက ဒါတွေကိုမကြည့်ပဲ မအလ စစ်ခွေးကိုသာ လက်ခံလိုက်ရင် မြန်မာပြည် စစ်မီး တောက်လောင်ပီ
2021-08-15 at 8:28 PM
ဒီလူယုတ္မာေတြဟာ သူတို႕အပစ္ကိုဘယ္တံုးကမွဝန္မခံတတ္တဲ႕ လူ႕ေအာက္တန္းစားေတြ ဒီးျဖစ္ရက္အားလံုးဟာ စစ္ေကာင္စီနဲ႕ စစ္ေခြးေတြမွာတာဝန္အျပည့္ရွိတယ္
2021-08-15 at 8:30 PM
ေရႊ တာ says:
2021-08-15 at 8:40 PM
Yama Min says:
2021-08-15 at 8:47 PM
Soe Paing Oo says:
2021-08-15 at 8:49 PM
Ma San Yu says:
2021-08-15 at 8:54 PM
မခံစားနှိုင်ပါဘူးနဲ့လေးစားဂုဏ်ယူနေရုံနဲ့တော့ ဒို့တွေရဲ့တာဝန်ဟာကျေပြွန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလုပ်ကြမှာလည်း၊တဦးတယောက်ခြင်းစီကလက်တွေ့ကျကြလုပ်ကြဖို့လိုပြီ
Ñway Òo Țhandar says:
2021-08-15 at 9:02 PM
ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများအားလုံးကောင်းရာမွန်ရာဘုံဘဝမှာ အေးချမ်းစွာ အနားယူပါတော့ရှင်..😔
အာဏာရှင်တွေ, အာဏာရူးတွေ ဘယ်တော့မှ ဇာတ်သိမ်းမကောင်းစေရဘူးးး.. စစ်ခွေးတွေ ကျဆုံးမယ့်နေ့ရောက်လာတော့မှာပါ
2021-08-15 at 9:03 PM
2021-08-15 at 9:13 PM
ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းေတာ့နားမလည္ပါဘူး အမွား အမွန္ ခြဲျခားႏႈိင္တဲ့အသိဥာဏ္ေတာ့႐ွိပါတယ္ သူတို႔စစ္အုပ္စုေတဘယ္လိုေျပားေျပားအသိဥာဏ္႐ွိတဲ့ျပည္သူေတကဘယ္ေသားအခါမွမယုံၾကည္ဘူးဆိုတာသိသင့္တယ္
2021-08-15 at 9:21 PM
က်ဆံုးသြားတဲ့သူရဲေကာင္းေတကလဲျပည္သူထဲက ျပည္သူပါပဲ သူတို႔ကိုဂုဏ္ယူမိသမိသလို သူတို႔ကိုမကာကြယ္ႏႈိင္တာကိုလဲ ကို႔ကို ကိုယ္အ႐ွက္ရမိပါတယ္
Phyo Zayar says:
2021-08-15 at 9:22 PM
Phyo Nyi Nyi Swan says:
2021-08-15 at 9:36 PM
လူ့လောက ကို အမှောင်တွေ နဲ့မဖြတ်သန်းချင်တော့ဘူး
မွေး ရပ်မြေ မွေးရပ်မြေ says:
2021-08-15 at 9:58 PM
2021-08-15 at 10:16 PM
2021-08-15 at 11:35 PM
Tcl Yoon Yoon says:
2021-08-16 at 3:09 AM
San Hoih Nu says:
2021-08-16 at 6:18 AM
ဝမ်း နည်း မျက် ရည် နဲ့​အ လေးပြု ပါ တယ် သူ ရဲ ကောင်း များ
Yin Yin Nwe says:
please help to have plan B, plan C to save our PDF
ပန်း သစ္စာ says:
ဒီအသံဖိုင်ကလည်း အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာပြောတဲ့အသံဖိုင်မဟုပ်ဘဲနဲ့ နောက်မှအသံဖိုင်အတုလုပ်ပီးတင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာဘဲ
2021-08-16 at 9:01 AM
2021-08-16 at 9:18 AM
မအလ ​ေနာက္​လိုက္​​ေခြး​ေတြ ဘာ​ေၾကာင္​း​ေျပာ​ေျပာ ဒို႔ျပည္​သူ​ေတြက မယံု​ေရခ် မယံုဘူး ​ေဟ့
2021-08-16 at 11:27 AM
MRTV FAKE NEWS.
MWD FAKE NEWS.
Eris Aung says:
2021-08-16 at 7:00 PM
LaMin Kabyar says:
2021-08-16 at 9:00 PM
ေကာင္းရာဘုံဘဝ ေရာက္ရွိျကပါေစ 🙏🙏🙏
ျဖစ္ေစခ်င္တာ အားလုံး အျမန္ျပည့္ဝပါေစ
ဟားငါးကောင် ရဲ့ ဟဒယသပိတ် တော်လှန်ရေးအငြိမ့် – အပိုင်း (၁)